बाइबल अभिलेखालयबाट — यात्रा ली - आधिकारिक साइट
बाइबल बाइबल बाइबल बाइबल बाइबल बाइबल बाइबल बाइबल बाइबल बाइबल बाइबल बाइबल बाइबल बाइबल
रह्छ कि एक कसरत
मेरो जीवन भर, म मौसम मार्फत जानुभएको म साँच्चै बाहिर काम गर्न उत्प्रेरित गरिएको छ जब. म उच्च विद्यालय मा थियो जब म बस बालिका प्रभावित पर्याप्त शौकीन हुन चाहन्थे (म असफल भए). मेरो विवाह अघि महिनामा म मेरो सुहागरात समुद्र तट शरीर मा काम गर्न खोजिरहेका थिए. आजभोलि, म सिर्फ म मेरो बिसवां विगतका लाइभ निश्चित गर्न प्रयास छु. मेरो motivations वर्षौंदेखि परिवर्तन, तर के परिवर्तन भएको छैन ती motivations कसरी fickle हो.
शायद तिमी स्वाभाविक प्रत्येक दिन उनको प्रशिक्षण खुराक को तस्वीरहरु र भिडियो जो पोस्ट मेरो साथी बाहिर बाहिर-कराउछ काम गर्न उत्प्रेरणा हुनुहुन्छ. तर तिमी मलाई जस्तै हुनुहुन्छ भने, आफ्नो motivations एक Trampoline मा एक बच्चा जस्तै माथि र तल जाने. आफ्नो काम देखि परिणाम बाहिर सधैंभरि लामो के भने, हुनत? तपाईं थप उत्प्रेरणा हुनेछ?
मेहनत Pays बन्द
को शीतकालीन ओलम्पिक गत महिना महिनामा म बिजुली द्रुत bobsledders र highflying Snowboarders हेर्नुभयो रूपमा श्रद्धा थियो. म आफ्नो पुष्ट उत्कृष्टता प्रभावित भएको थियो, म अनुशासन प्रशिक्षण बारेमा विचार गर्दा यो त्यहाँ लगियो हुनुपर्छ तर म अझ प्रभावित थियो.
प्रत्येक घटना को अन्त मा जब विजेता गरेको podiums मा विजयी खेलाडीहरूलाई उभिए, संग…
2 तिमोथी 3:16 भन्छन्, होईन सारा पद "धर्मशास्त्रमा भएका सबै परमेश्वरको प्रेरणाबाट छ।" त्यो, तर ती पाँच शब्द एक जीवनकालमा लागि मनन गर्न पर्याप्त भन्न. धर्मशास्त्रको शब्दहरू परमेश्वरको शब्दहरू हुन् भन्ने तथ्यलाई आफूलाई महत्वपूर्ण छ. र म ती पाँच लाग्छ…